Farmaajo oo Ciidamo cusub u diray Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo Ciidamo cusub u diray Gedo
Gedo waxaa ka jira loolan xooggan oo u dhaxeeya Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo isku haya maamulka gobolka, oo dadka degan ay diideen Maamulka fadhigiisu yahay Kismaayo.
GARBAHAAREY - Cutubto katirsan Ciidanka Xoogga dalka ayaa diyaarado lagu geeyay gobolka Gedo, gaar ahaan Beled-Xaawo, Luuq iyo Beled-Xaawo oo horey ugu sugnaayeen Askar uu tababarey Turkiga, oo Haramcad lagu magacaabo.
Sarkaal lagu magacaabo Bakaal Kooke ayaa Ciidanka la geeyay Xuduuda hogaaminaya, isagoo u sheegay Warbaahinta inay wadaan dhaq-dhaqaaq iyo diyaar-garow oo looga hortagayo duulaan uu qorsheynayo Axmed Madoobe.
Maamulka Axmed Madoobe ayaa sanadkan lagala wareegay dhamaan degmooyinka gobolka, waxaana ka dhacay Beled-Xaawo dagaal saameyn ku yeeshay isku socodka xuduuda Soomaaliya iyo Kenya, oo hadda Ciidamo badan lasoo dhoobay.
Wararka ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu doonayo inuu awood military kula wareego Garbahaarey oo la filayo inay ka dhacdo doorashadda Xildhibaanadda bisha December, waxaana arintaas ay keentay in Farmaajo uu Ciidan cusub ka diro Muqdisho.
Mudo dheer Gedo waxaa ka jiray loolan, iyadoo dadka degan gobolka ay jahwareeriyaan maamullada dusha looga keeno ee Muqdisho iyo Kismaayo laga soo magacaabo, waxaayna haddana noqdeen kuwa dagaal u joog ah.